Soft Kuyerera Fabric mutsinga dzinofamba nemukaka - China Qingdao Aedis Fabric mutsinga dzinofamba nemukaka
MICROFLOW mhepo diffusers vari yaakaita Micheka permeable engineered kuti dzakananga kwevari porosity. Mamiriyoni duku mhepo jets vari asunungurwa kubudikidza diffuser jira.
Kazhinji, MICROFLOW diffusers zvinoshandiswa bvikinyidza pane vanosanganisa mhepo. Kuti aite mhepo misha mhepo jets vanofanira diffuse nokukurumidza chaizvo. Uko POWERFLOW mhepo ndege anogona kutora 20 'kana kupfuura kuti diffuse chose, zviduku MICROFLOW mhepo jets diffuse 6 "pamusoro diffuser huri mukati.
Nokuti velocity iri duku mhepo jets DZEMUNHU DZINODZORA nokukurumidza, mhepo kazhinji kunoita kuti inaye semurwi uye bvikinyidza mhepo iri dzakaderera kwevari mumba.
MICROFLOW mhepo diffusers anoshandiswa kureva kuti rinokosha mafomu matatu. Sezvo ivo bvikinyidza pane vanosanganisa mhepo, ivo vari vakarongeka chaizvo chekubvisa yakasviba mhepo. Chechipiri, MICROFLOW diffusers kunogonawo kuva Sefa iri inoshanda nzvimbo, zvakadai sezvokudya kubudiswa, asi ipapo zvinoda kakawanda laundering. In pedyo chaizvo, nehanya dzokugara, MICROFLOW anogona kununura inotonhorera mhepo pasina drafts.
The zvinokosha zviri MICROFLOW mhepo diffuser magadzirirwo vari rejira porosity, kunofambira mberi kumanikidzwa, uye diffuser urefu uye diffuser dhayamita. Zvakakosha kushandisa Sefa pachiimbwa MICROFLOW diffusers kuderedza laundering. Application kurumbidza zvinosanganisira; Office nzvimbo, foni, Food processing, mukirasi, makamuri dzakachena, uye bvunzo Labs.
Cable chomumba Rail denderedzwa rechiedza Suspension HD Rail
Mukirasi Yakachena Rooms Food Processing Office Space
Air Jet plugs Condensate wopedza Swederai Tambo Fabric Damper Fittings Internal End Cap Logos Zipper uye Velcro Connections
Polyester iri shoma mugiredhi uncoated jira. It ane uchanyangadika tembiricha 350 ° F uye kunogona laundered muzvikamu zviduku. Polyester ndiwo moto retardant uye asangana ASTM E-84 Class A.
a) Cable: kunetsa wire ndiyo mari zvikuru kuita. Available nokuti diameters zvose, Single waya 30 "dhayamita uye kaviri kusvika 48" dhayamita uye katatu kupfuura kuti. Snaphooks vari munzvimbo dzokuzororera dzaiva pamusoro 36 "nzvimbo uye rinowanika mupurasitiki, Stainless simbi. Cable inowanikwa kwakakurudzira, Stainless simbi, uye raive nebutiro zvemapuranga. The Hurongwa rine waya (3/16 "dhayamita), turnbuckle, eyebolts uye waya okusungisa.
b) denderedzwa rechiedza Suspension: New denderedzwa rechiedza kunetsa kuturika hurongwa (HTS) anopa nechitarisiko FlowCon wako diffuser hurongwa kuti inflated apo mhepo pakugadzirisa kwava kure. Pfungwa iyi inogona kushandiswa iri nyore chete musara wire kuturika kana kuroorwa HD njanji kuchengeta FlowCon diffuser tichishungurudzika inflated pasina wokufema. Shoma kubva 10 "36" dhayamita, pfungwa iyi akakwana kuti mafomu apo deflated diffuser ruoko pasi ndiro dambudziko. Sections chinogona kuonekwa pasi uye yakashambidzwa hapana imwe basa. Zvinoriumba zvinosanganisira mwero mumwe musara Makakatanwa wire kana yedu HD chete njanji hurongwa.
c) HD Rail: New HD anodized aruminiyamu njanji ndiyo yedu shoma njanji hurongwa. Dzakanaka kwakanaka Kutarira kwedu FlowCon jira diffuser hurongwa. Available nokuti diameters zvose, Single njanji 30 "dhayamita uye kaviri kusvika 48" dhayamita uye katatu kupfuura kuti. Gliders vari munzvimbo dzokuzororera dzaiva pamusoro 36 "nzvimbo uye kuwanika epurasitiki. The hurongwa ine HD njanji, njanji zvitsigiso, couplers, uye kutwasuka zvitsigiso (nokukurumidza Links). Nharaunda Bends dziripo kusangana kugokora nharaunda.
d) chomumba Rail: Kugeza anodized aruminiyamu njanji inogona kushandiswa mafomu kuti FlowCon diffuser hurongwa kuva pedo siringi. Chomumba njanji inofanira kubatanidzwa munhu sandara sirin'i kana T-Bar hurongwa. Chomumba pagomo njanji chakagadzirirwa kutsigira kwedu 'D' mutsinga dzinofamba nemukaka diffusers. D mutsinga dzinofamba nemukaka diffusers anoshandiswa kana sirin'i kureba ane hanya. A miviri chomumba njanji gadziriro chinodiwa kutsigira 'D' mutsinga dzinofamba nemukaka diffuser. Sizes kubva 6 "kusvika 18" nharaunda (12 "36" kwazvo) zviripo. The hurongwa kuchibva chomumba pagomo njanji, uye magumo chimedu. Nharaunda Bends dziripo.
Previous: Micro Kuyerera Fabric mutsinga dzinofamba nemukaka
Next: Power Kuyerera Fabric mutsinga dzinofamba nemukaka
Fabric Soft mutsinga dzinofamba nemukaka
Oem Design Soft mutsinga dzinofamba nemukaka
Soft Air mutsinga dzinofamba nemukaka